कोरोनाको दोस्रो लहरकाे जोखिमबीच दर्शकको उपस्थितिमा खेल सुरु हुँदै - Global Online Khabar
ग्लोबल अनलाईन खबर २१८ पाठक संख्या March 23, 2021 मा प्रकाशित (२ महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
काठमाडौं, चैत १० गते । अखिल नेपाल फुटबल संघको आयोजनामा मङ्गलबारदेखि ‘थ्री नेशन्स कप’ फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ । कोभिडको दोस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावनाका बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भिडभाड हुने प्रकारले सभा, सम्मेलन, गोष्ठी आयोजना नगर्न सूचना जारी गरेको छ । तर अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)ले दर्शकको उपस्थितिमै ‘थ्री नेशन्स कप’को सबै खेल हुने जनाएको छ ।
एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले सामाजिक दूरीको पालना गरी दर्शकको उपस्थिति कायम राख्ने प्रष्ट्याउनुभयो । तर एन्फाले सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउने दाबी गरेपनि ब्यवहारमा त्यस प्रकारको तयारी गरिएको देखिन्न ।
पहिलो खेलमा आज किर्गिस्तानले बङ्गलादेशको सामना गर्दैछ । साँझ साढे पाँच बजे सुरु हुने खेलमा दुई विदेशी टोलीले एक अर्काको सामना गर्ने हुँदा दर्शकको उपस्थिति अपेक्षाकृत कम हुने अनुमान गरिएको छ । तर बिहीबार हुने नेपाल र किर्गिस्तानबीचको खेलमा कम्तीमा पाँचदेखि सात हजार दर्शकको उपस्थिति रहने अनुमान गरिएको एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले बताउनुभयो । सीमित परिधिभित्र सात हजार दर्शक राखेर खेलाइने अवस्थामा मापदण्ड पूरा हुन नसक्ने जनस्वास्थ्यविद्हरु तर्क गर्छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन हुने गरी कुनै प्रकारको क्रियाकलाप नगर्न आइतबार नै निर्देशन जारी गरेको छ । तर एन्फाले भने खेलको लागि टिकट बिक्री कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले “हामीले मापदण्ड तोकेर सचेत गराउने हो, मापदण्ड पालना गराउने निकायकोयस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने” बताउनुहुन्छ । गत साताको अन्त्यमा दैनिक थपिने सङ्क्रमित ५० जनाभन्दा कममा झरेको थियो । तर साताको सुरुवातदेखि चौबीस घण्टामा थपिने सङ्क्रमित बढ्दैछ । सोमबार चौबीस घण्टामा १५० जना सङ्क्रमित थपिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले ‘हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउने’ नेपालीको बानी परेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँले विगतकाे अनुभव, विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाब र मन्त्रालयको मापदण्ड पालनामा लापरवाही भए भोलि भयावह स्थिति आउनसक्ने चेतावनी दिनुभयो । दर्शकको क्षणिक रमाइलोका लागि जनस्वास्थ्यलाई जोखिममा राख्न नहुने डा. गौतमले तर्क गर्नुभयो । गोरखापत्र